ဒီဇင်ဘာလ 2013 |4၏စာမျက်နှာ 18 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2013 » ဒီဇင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 4)
လစဉ်မော်ကွန်း: ဒီဇင်ဘာလတွင် 2013
Apple ရဲ့အသစ်က Mac အတွက် Pro ကိုမနက်ဖြန်ရောက်ရှိ, ထက်ပိုမိုကုန်ကျကို configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် ...
နေ့စဉ် EditionApple ရဲ့အသစ်, Mac Pro ကိုမနက်ဖြန်ရောက်ရှိ, အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, www.extremetech.com အပေါ်ထက် ... ကြည့်ရှုပါကပိုကုန်ကျကို configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် - Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
SSL ကို Console အ Partner ကွန်ယက် Live ရန်ဖင်လန်ခုနှစ်တွင် Msonic ထည့်ပေးသည်
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့် Solid State Logic livedesignonline အပေါ် Finland.See အတွက်၎င်း၏တိုက်ရိုက် console ကိုဖြန့်ဖြူးအဖြစ်လိုလားသူအသံအရောင်းနှင့်ထောက်ခံမှုကုမ္ပဏီ msonic အလင်း + အသံခနျ့ထား Console အ Partner ကွန်ယက်တိုက်ရိုက်ဒီဇိုင်း Live ရန်ဖင်လန်ခုနှစ်, Daily သတင်းစာ EditionSSL ထပ်ပြောသည် Msonic မဂ္ဂဇင်း Beat ။ com
MOG Technologies ကအတူ FileCatalyst အပေါင်းအဖေါ်များထုတ်လွှင့် Workflows အရှိန်မြှင့်ရန်
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့် Workflows PR စနစ်က်ဘ် (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်) Unlimi-Tech မှ Software များ, Inc, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် FileCatalyst, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်၏ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးရှေ့ဆောင်အရှိန်မြှင့်ရန် MOG Technologies ကအတူနေ့စဉ် EditionFileCatalyst အပေါင်းအဖေါ်များမဂ္ဂဇင်း Beat ... www.prweb.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
systems ပေါင်းစည်းရေး: အဆိုပါ Playbox Portfolio
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း, Daily သတင်းစာ EditionSystems ပေါင်းစည်းရေး Beat: အဆိုပါ Playbox Portfolio - ဥရောပအကြီးမားဆုံးဆက်ကပ်အပ်နှံထုတ်လွှင့်ဂိမ်းကွန်ရက်အဆိုပါကစားသမား Channel ကို www.4rfv.co.uk အပေါ် PlayBox နည်းပညာ EdgeBox automated ဝေးလံသောပလေးအောက် solution.See ရှေးခယျြခဲ့
Wohler Connor စုဆောင်းလေ့ကျင့်
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionWohler Connor အသံလွှင့် Connor PlayBox နည်းပညာထဲကနေ Wohler ပူးပေါင်းမည်စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ ကြောင်းမတိုင်မီကသူ www.broadcastnow.co.uk အပေါ် Boxer Systems.See အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်
Catalyst မှစ. ဂလိုဘယ်ရုပ်မြင်သံကြားကိုဆညျးပူးဖို့ NEP
က GTV ဆည်းပူးဖို့ပြတ်သားသဘောတူညီချက်သို့ ဝင်. မူကြောင်းကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် NEP Group မှ Inc က ( 'NEP') - ဒီဇင်ဘာ 18, 2013 - တစ် Worldwide ၏ဖျော်ဖြေမှု Powerhouse ဆစ်ဒနီ, NSW, သြစတြေးလျနှင့် Pittsburgh Create မှနှစ်ဦးဦးဆောင်တီဗီနည်းပညာထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်သူများကမှီဝဲ Catalyst ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာများ ( 'Catalyst') ကနေဦးပိုင်လီမိတက် Pty Ltd မှ ( 'ဂလိုဘယ်ရုပ်မြင်သံကြား' သို့မဟုတ် '' ဂလိုဘယ် ') ။ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများထုတ်ဖော်မခံခဲ့ရပါ။ အဆိုပါငွေပေးငွေယူတတ်၏ ...
တင်းကြပ်စွာ Tapeless အားသာချက်ကောင်းလာတာပါ
ခရစ္စမတ်ယခုအများအပြားထုတ်လွှင့်ဖို့တစျခုအရာပေမယ့်ဆိုလိုတယ်: က€âတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အမြတ်အများဆုံး franchise အချိန်ကိုရဲ့ "ဟုအဆိုပါစနေနေ့ညဥ့်အလင်းဖျော်ဖြေရေးဧရာ€" သူတို့ပြေးကောက်ချက်ချ။ ယခုနှစ်တွင်ဘီဘီစီရဲ့ Semi-အနုပညာရှင်ကခုန်ပြသ, အတိအကျကနေသည်လာကြ, ratings စစ်အတွက်ဗြိတိန်ရဲ့အခြားအခေတ်ရေစီးကြောင်းအခမဲ့-to-air ထုတ်လွှင့်, ITV ပေါ်တွင်ယခင်က All-အောငျနိုငျ X-Factor ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပုံရသည်။ ထိုအစဉ် ...
အိုင်တီ: မဆိုအသံလွှင့်ဌာန (။ Pt 1) ၏ကျောရိုး
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း, Daily သတင်းစာ EditionIT Beat: မဆိုအသံလွှင့်ဌာန၏ကျောရိုး (။ Pt 1) 4RFV ထိုသို့ငါ TSL မှပြောနေတာခြင်းဖြင့်စတင်ပါ, အဲဒီနောက် www အပေါ်မောင်လေးကလည်း, Playbox နှင့်အသံလွှင့် Networks.See အပေါ်ခေါ်ခဲ့သည် .4rfv.co.uk